DHAGEYSO: Somaliland oo war culus ka soo saartay ka qeybgalka caleema saarka Axmed Madoobe | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Somaliland oo war culus ka soo saartay ka qeybgalka caleema saarka...
Hargeysa (Halqaran.com) – Waxaa maalmihii la soo dhaafay jiray muran ka dhashay in Xildhibaano ka tirsan Somaliland ay ka qeyb-galayaan Xaflada Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana taasi ay keentay in Somaliland ay go’aano kasoo saarto ka qeyb-galka Xafladaha iyo shirarka u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed.
Garyaqaanka guud ee Somaliland Cabdi Samad Cumar Maal ayaa sheegay in Sharciga u yaalla Somaliland uu qabo in qof walba ha ahaado Siyaasi, Aqoon yahan iyo cid kasta in uusan ka qeyb-geli karin Arrimaha siyaasiga ee Soomaaliya.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dadka kaliya ee ka qeyb-galaya Xaflad ama arrimaha siyaasiga Soomaaliland ay tahay xukuumadda, taasina ay horay u saxiixeen labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliland.
”Cid kasta oo ka qeyb-gasha wada-hadallada ama Xafladaha Arrimaha siyaasiga Soomaaliya ama ku taageerta ficil iyo qoraal waa dambiile galay qiyaano qaran xilkiisana ku weeynaya laguna xiraayo, wuxuuna hoos u dhigay maqaamka Somaliland ayuu yiri” Garyaqaanka guud ee Somaliland.
Halka Hoose ka dhageyso go’aanka Somaliland:
qeybgalka caleema saarka Axmed Madoobe
Somaliland oo war culus ka soo saartay